မြန်မာမှန်ရင်ဖတ်ကြပါ။(၂) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » မြန်မာမှန်ရင်ဖတ်ကြပါ။(၂)
Posted by မိုးတိမ် on Oct 16, 2012 in Copy/Paste, Members | 56 comments
Total Annihilation of others’ religions
အင်ဒိုနီးရှားမှာ – Borobudur စေတီကြီး
အာဖဂန်နစ္စတန်မှာ – Buddhas_of_Bamiyan ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်
မြန်မာနိုင်ငံ – ရွှေတိဂုံစေတီတော်ကြီး
“ပို့ မဲ့ပို့ ..ကူးတို့ ရောက်အောင်ပို့ ” ကုရ်အာန်ညွှန်ကြားချက်အရ ဗုဒ္ဓဘာသာကို မွတ်ဆလင်တွေ ဖျက်ဆီးမဲ့ ဖျက်ဆီးတော့ အစ၊အန မကျန်အောင် ဖျက်ဆီးပေါ့၊ ဟုတ်လား။
ဒါတွေအားလုံးတစ်ခုမှ မမှားဘူး။ မိုဟာမက် လုပ်ခိုင်းတာမှန်သမျှဟာ အမှန်တရားပဲဆိုရင်တော့ မိုဟာမက်ဟာ ——– Racially Offensive words : Deleted by Admin ———–
အဲဒီ မြန်မာနိုင်ငံကမြို့တွေ အားလုံးထဲမှာ… ” ဘယ်မြို့မှာ ဗလီရှိသလဲ ” လို့ မေးလို့မရတော့ဘူး။
” ဘယ်မြို့မှာ ဗလီ မရှိသေးဘူးလဲ ” လို့ သာမေးရတော့မယ်။
Qur’an:8:7 ~”Allah wished to confirm the truth by His words: ‘Wipe the infidels out to the last.'”
ဤကမ္ဘာကို စောင့်ရှောက်လျှက်ရှိသော လောကပါလတရား ၊ ဓမ္မတရား ၊ ဗြဟ္မာဏတရား ၊ သမ္မာတရား တို့ အားဖြင့် ——– Racially Offensive words : Deleted by Admin ———–
သဂျီးမူအရ post ၂ ခုစတင်ပါပြီ။ကော်မန့်မပိတ်ပါနဲ့၊မဖျက်ပါနဲ့ brain strong ရတာာပေါ့။ကုလားတွေဝေဖန်
ပြီးတင်ဦးမှာပါ။အားလုံးဖတ်ကြပါစေ မကြေနပ်ရင် ကျွန်တော်ကိုဝိုင်းဆဲကြပါစေ။အဲဒါကိုသိချင်ပါတယ်။
ဒီရွာသူားဆိုရင်.. ဒီရွာကောင်းကျိုး.. မန်းဂဇက်ကောင်းကျိုးဖြစ်ဖို့.. အကျိုးရှိဖို့.. ကြိုးစားလုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်..။
ဒီရွာထဲ.. မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ရွာသူား.. ၉ထောင်ကျော်ရှိတယ်..။
ကိုယ်တိုင်ရှိနေ.. စာတွေရေးသားနေ.. အတွေ့အကြုံ..ဗဟုသုတ.. အမြင်တွေဖလှယ်တဲ့..နေရာ တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်.. ရေရှည်တည်တန့်နိုင်အောင်.. လုပ်သင့်ပါတယ်..။
ကိုရင်.. ဒီကိုမှတ်ပုံတင်ဝင်ရောက်တဲ့.. ဒီနှစ်ဆန်းပိုင်းကစလို့.. ရွာအကျိုးအတွက်.. ဆွေးနွေးရေးသားထားတာတွေ.. လုပ်လည်း လုပ်ခဲ့တယ်လို့.. ယူဆမိ.. မြင်မိပါတယ်.။
တကယ်လို့.. အခုစာတွေမကျေနပ်လို့.. အစ္စလမ်မစ်အစွန်းရောက်တဖွဲ့ဖွဲ့က.. မန်းဂဇက်..ဒီရွာ.. ဒီဝက်ဆိုက်ဘ်က်ို… ဖျက်ဆီးမယ်ဆိုရင်.. ကိုရင်ဘာများလုပ်ပေးနိုင်သလည်း..
.. အရင်တခေါက်(စက်တင်ဘာလဆန်း) က.. ဘင်္ဂလားဆိုင်ဘာအာမီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်.. ဒီရွာရဲ့.. သိမ်းထားတဲ့.. ဒေတာတွေပျက်စီးသွားခဲ့ဖူးတယ်.. ကိုရင်ဘာများလုပ်ပေးခဲ့သလည်း..
ကိုယ်တိုင်ရွာထဲပါဝင်ရေးသားခဲ့တဲ့.. ၁၀လစာလောက် အချိန်ခရီးရဲ့.. ဒေတာတွေ.. အပျက်ခံနိုင်သလား…
စာတွေအပေါ်… တာဝန်ယူရဲသလား.. :harr:
သဂျီး ခင်ဗျားသတ်စားခဲ့တဲ့ ကိုဘေးနွားကြီးအတွက် တာဝန်ယူရဲသလား၊ နောင်ဘဝမှာ အဲဒီနွားကြီးနဲ့ မျက်နှာခြင်း ဆိုင်ဝံ့သလား။ ကိုဘေးနွားကင် ကြော်ငြာဖို့ ဒီဆိုက်ထောင်ထားတာဆိုရင် ကျုပ်တို့တတွေ နှစ်ရှည်လများ သေးချေးမြက်ရှည်တွေကနေ စီးဆင်းလာတဲ့ နှလုံးသဲပွတ် (အုတိုက်ဖို့ ဆပ်ပြာကုန်နေလို့) စာတွေကို ပျက်ရယ်ပြုတာနဲ့ အတူတူပဲ…။ ဝိုင်းဆဲဂျကွာ.. မုတ်ဆိတ် မွာမွတ်ရှာပွတ် ဦးခိုင်… ကို…
တကယ်လို့.. အခုစာတွေမကျေနပ်လို့.. အစ္စလမ်မစ်အစွန်းရောက်တဖွဲ့ဖွဲ့က.. မန်းဂဇက်..ဒီရွာ..
ဒီဝက်ဆိုက်ဘ်က်ို… ဖျက်ဆီးမယ်ဆိုရင်.. ကိုရင်ဘာများလုပ်ပေးနိုင်သလည်း..
သူတို့ ကတော့ တည့်ပဲဆော်ဆော် ပတ်ပဲဆော်ဆော်……
မတော်တဆလေး ထိမိရင်တောင် သဂျီးဆိုက်အတွက် အာမခံချက်မရှိပါဖူး……
တရေးနိုး စိတ်ကူးပေါက်ရင်လည်း ၀င်ဆော်ချင်ဆော်မှာနော်……….
တာဝန်ယူတဲ့အပိုင်းကိုတော့ သဂျီးပြောတာကို ထောက်ခံပါတယ်……
သဂျီး မေးလက်စနဲ့ ဆက်မေးအုံးမယ်………
တကယ်လို့သူတင်တဲ့စာမျိုးမတင်ရင် အဲ့လို သဂျီးဆိုက်ကို မတိုက်ပါဖူးဆိုတဲ့…..
စောတာနဲ့ နောက်ကျတာပဲ ကွာမယ်
ဗေထိဆို သူတို့ ကဆော်မှာပဲ။
ဟား ဟား ကောင်းလိုက်တဲ့ မေးခွန်း ဂွတ်လင့်တည်း ဂွတ်လင့်တည်း။ ။
သဂျီးအူးလေးခိုင်ခင်ည..။ ကိုရင်မိုးတိမ်ရေးတာ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တော့
ရွာသူား ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအတွက် သတိချပ်မိစေမှာပါ။
ကိုရင်တို့ မြန်မာလူမျိုးတွေက တခါတလေ ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင် အစွန်းရောက်တွေးတတ်သလို
ပေါ့ပေါ့လေးလည်း ဘာသာရေးဝါးမျိုးနေတာကို ဘာသိဘာသာ နေမိတတ်ကြတယ်။
ဒါမျိုးတွေ ဖတ်ရတော့လည်း ခံစစ်တံတိုင်း လုံအောင်ကာဖို့ သတိပြုမိကြမယ်မြင်မိပါသည်။
လောကမှာ ဘယ်အရာမှ ရေရှည် မတည်တံ့မမြဲနိုင်ဘူးလို့ အနိစ္စ… ပါ။
သဂျီးရွာလည်း အချိန်တန် အနိစ္စ ဖြစ်သွားပါမည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာသည်လည်း တချိန်ကျ
အနိစ္စဖြစ်သွားပါလိမ့်မည်။ အနိစ္စမဖြစ်ခင် အနတ္တမဖြစ်အောင်… ကိုရင်တို့
အနိစ္စ … အနိစ္စ ….
သဂျီးတူမ ကိုရင်နဲ့ ရ…
သဂျီး ခင်ဗျာ ဘင်္ဂလားဆိုင်ဘာအာမီတိုက်ခိုက် မှာကြတော့ ကြောက်ပြီး သံတွဲက လူတွေတင်တဲ့ပိုစ့်တွေကြောင့် မြန်မာဆိုင်ဘာအာမီက တိုက်မှာကြတော့ ဘာဖြစ်လို့ မကြောက်လဲ ကျွန်တော်တို့ က ကျန်တဲ့ ရွာထဲက စီနီယာ စာပေသမားတွေကို အားနာလို့ ဘာမှ မလုပ်ချင်ပါဘူး ဒါကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး တစ်ဖက်သတ်ဆန်တဲ့ ပိုစ့်တွေကို ကော်မန့် ပဲပိတ်ပြီး ပိုစ့်မဖျက်တာဘာသဘောပါလဲ သိချင်ပါတယ်
အင်း.. ကျုပ်ကကြောက်တယ်လို့ တလုံးမှမပြောမိပါလားဗျာ..။
ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်.. ရဲရဲတာဝန်ယူစေချင်လို့.. ဒီမေးခွန်းမေးတာပါ…။
မြန်မာတွေဆိုရင်.. ဒီရွာအကြောင်း.. ဘာလဲ..ဘယ်လည်း ရှင်းပြလို့ရပြီး.. ဘင်္ဂလားဆိုင်ဘာအာမီဆိုရင်.. အိမ်တခါးသွားခေါက်ဖို့ ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်လို့ပါ..။
.. အခုလောလောဆယ်.. ရွာကို တိုက်ခိုက်နေကြပြီဖြစ်ပါကြောင်းနဲ့.. မတော်.. ဒေတာတွေတခုခုဖြစ်သွားရင်. ဘာလုပ်ကြမယ်ဆိုတာ.. စဉ်းစားထားပေးဖို့အကြောင်း…
ဒီတစ်ခါ ဒို့ဘဂျီး လေသံကြည့်ရတာ …
သဂျီး ကသာ ကြောက်တယ်လို့ တလုံးမှ မပြောမိပါလို့ဆို ပေမယ် အပေါ်က ကွန်မန့် မှာ အရင်တစ်ခေါက်က ဒေတာတွေ ဖျက်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဘင်္ဂလားဆိုင်ဘာအာမီ နဲ့ တော့ ထိပ်တိုက်တွေ့ ချင်ပုံမရဘူး ကျွန်တော်တို့ ကို ကြတော့ ဂရုစိုက်စရာ မလိုဘူးလို့ ထင်နေလားတော့မသိဘူး ကျွန်တော် အစက ဘာမှ ၀င်မပါဘူးလို့ နေနေတာပဲ ဒါပေမယ့် ဒီရက်ပိုင်း တက်လာတဲ့ပိုစ့်တစ်ချို့ ကြောင့် မကျေနပ် တာတော့အမှန်ပဲ ၀င်ပါသင့်ရင် ပါရတော့မှာပဲ ကျွန်တော် တော်ယုံ တန်ယုံ ကွန်မန့် တွေကို ၀င်ပေးလေ့မရှိပါဘူး သဂျီး အနေနဲ့မျှမျှတတ တွေးပေး စဉ်းစားပေးစေချင်ပါတယ်
ဒီအတိုင်းရေးတော့လည်း ရပ်ကွက်ထဲက ပစ်စာလိုဖြစ်လိမ့်မယ်ခင်ဗျ။
ဒီခေတ်ကြီးမှာ အစဆွဲသင့်၊ မဆွဲသင့် ချင့်ချိန်စရာဖြစ်ပေမဲ့ သမိုင်းအထောက်အထား ခိုင်ခိုင်လုံလုံ၊ reference ကောင်းကောင်းနဲ့ရှာပြီး research ကောင်းကောင်းလုပ်သင့်တယ်။
ပြီးရင် အသေအချာ publish လုပ် ဟိုဘာသာခြားတွေဘယ်လိုဖြေရှင်းမယ်ဆိုတာသိချင်သေးပ။
သူတို့ ရှက်တတ်မယ်ဆိုရင်တော့ သူကြီးပြောသလို တောင်းပန်ကြမလား။ (မထင်မိပါ)
research လုပ်တဲ့ကောင်ကိုဘဲ ၀င်သတ်သွားမလားမသိ။:D
အဲလိုဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ကောင်တွေသေပြီး ငရဲရောက်သွားတာကို ပြနိုင်လို့ကတော့ နောက်ကောင်တွေလုပ်ရဲတော့မှာမဟုတ်ဘူး
အခုလည်း မြန်မာတစ်ပြည်လုံးက မကြိုက်ပါဘူးလို့ ဆန္ဒတွေပြကြ အစိုးရကိုယ်တိုင်ကလည်း အိုအိုင်စီရုံး ကို မြန်မာပြည်တွင်းမှာ
ဖွင့်ခွင့် မပေးတော့ပါဘူးဆိုတာတောင် မြန်မာပြည်ထဲကိုဝင်ဖို့ နိုင်ငံတကာအကူအညီယူဦးမယ် ဆိုပဲ
ဘာအကြံနဲ့ မြန်မာပြည်ထဲကို ဒီလောက်ဝင်ချင်နေပါလိမ့်နော်………..
ကိုမိုးတိမ်… မြန်မာမှန်ရင် ဖတ်ကြပါဆိုလို့ကျနော်လည်း ဒီမြေမှာမွေး ဒီမြေမှာ ကြီးတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်
၀င်ဖတ်ကြည့်ပါတယ်…အခုချိန်ထိ ဘာသာရေး မုန်းတီးမှုပိုစ့်တွေမှာ ၀င်မပါချင်ခဲ့ပေမယ့် အစ်ကို့ပိုစ့်ကို ဖတ်ပြီး ၀င်မပြောလို့မဖြစ်တော့လို့ အခုပြောပါရစေ… ကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာချင်း မတူပေမဲ့ ကျနော်တို့လည်း ဒီမြေမှာမွေး ဒီမြေမှာကြီးခဲ့တဲ့သူမို့ ဒီနိုင်ငံကိုချစ်တာ အစ်ကိုတို့ထက်တော့ မလျော့ပါဘူး… နိုင်ငံရပ်ခြားရောက်နေတဲ့ အချိန်မှာလည်း exhibition တွေမှာ မြန်မာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစွာနဲ့ ပြသခဲ့ဖူးပါတယ်… မကြောက်မလန့်နဲ့ စစ်သံရုံးထိသွားပြီး လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းငှားပြီး ပြခဲ့ပါတယ်… အဲဒါ ၉၆ ၀န်းကျင်လောက်ကပါ… သူတို့ interrogate လုပ်တာတောင် ခံလိုက်ရသေးတယ်… ပြီးတော့ ကျနော့်တို့ကို မေးလိုက်သေးတယ်… Beyond Rangoon ကော ကြည့်ပြီးပြီလားတဲ့…
အစ်ကိုရေးထားတဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာ Islam ဘယ်လိုပြန့်ခဲ့သလဲဆိုတာ သမိုင်းကို သေချာလေ့လာကြည့်ရင် သိနိုင်ပါတယ်… ပိုပြီး ပြည့်စုံသွားအောင် MMSY မှာဖော်ပြထားတဲ့ article တစ်ခုထဲက စာသားတစ်ချို့ကို ကူးထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်…
စပိန်နိုင်ငံကိုကြည့်ပါ။ မွတ်စလင်မ်တွေ နှစ်ပေါင်း ၈၀၀ နီးပါး အုပ်ချုပ်ခဲ့ပါတယ်။ မည်သည့် ဘာသာခြားတစ်ဦးကိုမျှ အင်အားသုံးပြီး အစ္စလာမ်ဘာသာကို လက်မခံခိုင်းခဲ့ပါ။ ဒါပေမဲ့ Crusaders တွေဟာ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် တစ်ဦးမကျန်အောင် သုတ်သင်ရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေ့ စပိန်မှာ မည်သည့်မွတ်စလင်မ် တစ်ဦးမျှ ဝတ်ပြုရန် ဖိတ်ခေါ်ခွင့်ပင်မပေးပါ။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ၈၈% ရှိပါတယ်။ မွတ်စလင်မ်တွေ အရေအတွက် ၅% ရှိတယ်ပဲထားပါ။ ဘယ်လိုအချိုးချတဲ့ သင်္ချာပုံသေနည်း နှင့်ပဲတွက်ပါ ဘယ်နည်းနှင့်မျှ မြန်မာပြည်တွင်း နေထိုင်သူ လူဦးရေ ကွာခြားချက်အရ အစ္စလာမ်နိုင်ငံဖြစ်လာစရာမရှိပါ။
အာရေဗီးယားကျွန်းဆွယ်တစ်ခုလုံးကို နှစ်ပေါင်း ၁၄၀၀ အတွင်း အကြာဆုံး အုပ်ချုပ်ခဲ့တာ မွတ်စလင်မ်တွေပါ။ ဒီနေ့ အာရပ်တစ်ခွင်မှာ မိရိုးဖလာ ခရစ်ယာန်ကိုးကွယ်သူ Coptic Christian အရေအတွက် ၁၄သန်းကျော် ရှိတယ်။ တကယ်လို့ အခုဝါဒဖြန့်နေသလို မွတ်စလင်မ်တွေဟာ အင်အားကြီးမားလာရင် စစ်ပွဲတွေ ဖန်တီးပြီး အစ္စလာမ်ဘာသာထဲ အတင်း အဓမ္မ သွတ်သွင်းတယ်ဆိုရင် ဒီ Coptic Christian တွေ ဒီနေ့ ရှိတော့မည်ပင် မဟုတ်ပါ။
အရှေ့ အာဖရိက၊ မလေးရှား နှင့် ကမ္ဘာ့မွတ်စလင်မ် အများဆုံး နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံ များကိုကြည့်ပါ။ သမိုင်းတစ်လျှောက် ဘယ်မွတ်စလင်မ် စစ်တပ်မှ အဲဒီနိုင်ငံတွေကို မရောက်ရှိခဲ့ပါ။ အဲဒီဒေသက လူမျိုးစုတွေကို အစ္စလာမ်ဘာသာကို လက်ခံရန် မည်သူမျှ အင်အားမသုံးခဲ့ပါ။
အစ္စလာမ်ဘာသာမှာ အင်အားသုံးပြီး သာသနာထဲ ဇွတ်ဝင်ခိုင်းဖို့ ဘယ်လိုမျှမဖြစ်နိုင်တဲ့ အခြေခံအချက်ဟာ ကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်ထဲမှာ ပါရှိတဲ့ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ရဲ့ အောက်ပါ အမိန့်အရ သာပိုပြီး ထင်ရှားစေပါတယ်။
“—မည်သူတစ်ဦး တစ်ယောက်ကိုမျှ အစ္စလာမ်သာသနာတော်တွင်း၌ ဝင်ရောက်ရန်အတွက် အတင်းအဓမ္မ အနိုင်အထက် အလျင်းမပြုရ။ —”
ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ် ကဏ္ဍတော် ၂၊ စာပိုဒ်အမှတ် ၂၅၆။
အစ္စလာမ်ဘာသာဟာ လူတို့ရဲ့ ထံပါး ဓါးမိုး၍ ပြန့်ခဲ့တယ်ဆိုတာမှန်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီဓါးဟာ သံနှင့်ပြုလုပ်ထားတာ မဟုတ်ပဲ မှန်ကန်မှု၊ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှု စတဲ့ Intellect ဆိုတဲ့ ဥာဏ်ပညာရဲ့ ဓါးပဲဖြစ်ပါတယ်။ အစ္စလာမ်ဘာသာရဲ့ သင်ကြားမှုတွေဟာ လူတွေရဲ့ အသိဥာဏ်နဲ့ လျော်ညီတဲ့ နှလုံးသားက လက်ခံနိုင်တဲ့ သဘာဝကို မဆန့်ကျင်ပဲ သဘာဝကို အသုံးချပြီး လောကီ လောကုတ္တရာ နှစ်ဋ္ဌာနရဲ့ စစ်မှန်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းမှုကို ဆောင်ကျဉ်းပေးနိုင်တဲ့ အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒါကြောင့်လည်း အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ဟာ ကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်မှာ အခုလို အမိန့်ပေးထားပါတယ်။
“——အသင်သည် လူတို့အား ဥာဏ်ပညာဖြင့်လည်ကောင်း၊ ကောင်းမြတ်သော ဆုံးမသြဝါဒဖြင့် လည်းကောင်း အလ္လာဟ်အရှင်မြတ် ဘက်တော်သို့ ဖိတ်ခေါ်ပါလေ။ ထိုမှတပါး အသင်သည် ၎င်းတို့အား အကောင်းဆုံးနည်းဖြင့် အချေအတင်ပြောဆိုပါလေ—-”
၁၉၈၆ ခုနှစ် Reader’s Digest ‘Almanac’ မှာ ဆောင်းပါးတစ်ခုမှာ ကမ္ဘာ့ဘာသာကြီးများရဲ့ တိုးတက်မှု စာရင်းဇယားကို ၁၉၃၄ ခုနှစ်မှ ၁၉၈၄ ခုနှစ် အထိ နှစ်ပေါင်း ၅၀ ကာလ အပိုင်းအခြား တစ်ခု နှင့် ပတ်သက်ပြီး ရေးသားထားပါတယ်။ အဲဒီ ဆောင်းပါးကိုပဲ ‘The Plain Truth’ မဂ္ဂဇင်းမှာထပ်မံ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
ဒီနေ့ အမျိုးမျိုးသော လိမ်လည်ဝါဒဖြန့်နေတဲ့ကြားက အမေရိကန်နိုင်ငံ နှင့် ဥရောပမှာ အစ္စလာမ်ဘာသာဟာ လက်ခံကိုးကွယ်ယုံကြည်လာသူ အများဆုံးစာရင်းထဲမှာ ထိပ်ဆုံးမှာပါ။ အဲဒီနိုင်ငံတွေမှာ ဒီလောက် အစ္စလာမ်ဆန့်ကျင်ရေး ပိုစတာတွေတပ်ပြီး တိုက်ခိုက်နေတာတောင် သိန်း သန်းချီပြီး အစ္စလာမ်ဘာသာကိုလက်ခံလာသူတွေတိုးလာနေတာ ဘယ်ဓါးနဲ့ ခြိမ်းခြောက်နေလို့လည်း စဉ်းစားကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်။
မလေးရှားနိုင်ငံမှာ မွတ်စလင်မ်တွေရဲ့ အရေအတွက်ဟာ စုစုပေါင်းလူဦးရေရဲ့ ၅၅%သာရှိပါတယ်။ ကျန်တာ တရုတ်ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ တရုတ်ခရစ်ယာန်၊ တမီလ်ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ တမီလ်ခရစ်ယာန် စသဖြင့် လူတွေ နှစ်သက်ရာကို လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ခွင့်ပေးထားသလို ဘယ်ဘာသာကိုမျှ ဘာမီဒီယာကိုမျှ သုံးစွဲပြီးစော်ကားခွင့်မရှိပါဘူး။ မည်သည့်ဘာသာဝင်ကမျှ အမျိုးပျောက်မှာလည်း စိုးကြောက်မနေသလို လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးလိုရုံးမှာတောင် “မြေမြို၍ လူမျိုးမပျောက်၊ လူမြိုမှ လူမျိုးပျောက်မည်” ဆိုတဲ့စာတမ်း အစား “ယဉ်ကျေးပါ၊ တာဝန်ကျေပါ၊ ပြုံးရွှင်စွာ အကူအညီပေးပါ” စတဲ့ စာတမ်းများနှင့် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော လူယဉ်ကျေးများရဲ့ ဆက်ဆံရေးကို မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
“ဒီနေ့ လူတွေဟာ အာရပ်တွေလက်ထဲ တစ်နေ့ကျရင် နြူကလီယားဗုန်းရောက်သွားမှာကို စိုးရိမ်နေကြတယ်။ အမှန်တော့ အဲဒီ လူတွေဟာ အဖြစ်မှန်ကို ယနေ့တိုင် မရိပ်စားမိတာပါ။ အစ္စလာမ်ဆိုတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဗုန်းဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ တမန်တော်မြတ် မုဟမ္မဒ်(peace be upon him) မွေးဖွားလာတဲ့နေ့ မှစပြီး ကျရောက်ပြီးဖြစ်တယ် ဆိုတာပါ။”
လက်တွေ့အဖြစ်အပျက်ကလေး တစ်ခုမှာ လူငယ်တစ်ဦး နိုင်ငံရပ်ခြားမှာရှိနေစဉ် လူမျိုးရေးမုန်းတီးမှု ဖြစ်လာအောင် Youtube ကနေ စော်ကားထားတာကို မလေးရှားနိုင်ငံအတွင်းရောက်တာနှင့် လေဆိပ်မှာတင် တရားဝင် ဝန်ချတောင်းပန်စေခဲ့ပါတယ်။
ဒီလိုအရေးယူမှုမျိုးတွေ အမှန်တကယ်လုပ်လာမယ်ဆိုရင် ယုတ်မာလှတဲ့ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ နေ အမုန်းဝါဒီများရဲ့ တစ်နပ်စား အကြံများကို ထိန်းချုပ်နိုင်မှာဖြစ်သလို ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများနည်းတူ တိုးတက်တဲ့လူ့ဘောင်သစ်ဆီသို့ လျှောက်လှမ်းနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းပါ..။
ဘယ်ဘာသာမှာမဆို စုန်းပြူးတွေကတော့ ရှိစမြဲပါ..ကောင်းတဲ့သူရှိသလို မကောင်းတဲ့သူလည်း ရှိမှာပဲ…
ဟိုဘက်ရွာမှာဖြစ်တဲ့ လူသတ်မှုကို ဒီဘက်ရွာက လူသတ်သမားရဲ့အမျိုးတွေပါ ပေးဆပ်ရမယ်ဆိုရင် ဘယ်တရားပါ့မလဲ…အစ်ကိုက မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့ ၅% – ၈% လောက်ရှိတဲ့ လူအရေအတွက် ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာနဲ့ဘုရားသခင်ကို ရိုင်းစိုင်းတဲ့အသုံးအနှုန်းနဲ့ စော်ကားတာကတော့ ဘယ်လောက်ရိုင်းစိုင်းတယ်ဆိုတာ ယဉ်ကျေးတဲ့သူတိုင်း သိမြင်နိုင်ပါတယ်… ဂေဇက်က အဆင့်ရှိတဲ့ ဆိုဒ်တခုဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီလိုအသုံးအနှုန်းမျိုးတွေ ရှောင်စေချင်ပါတယ်…
ကျနော်တို့လည်း သူငယ်တန်းကတည်းက ကမ္ဘာမကြေဆိုခဲ့သူတွေပါ… နိုင်ငံအတွက် လိုအပ်လာရင် ပေးဆပ်ဖို့သွေးမကြောင်ပါဘူး…သိချင်ရင် ကိုမင်းကိုနိုင်၊ ကိုမြအေးတို့ကိုမေးကြည့်ပါ… ၈၈တုန်းက မွတ်စလင်ကျောင်းသားတွေ ဘယ်လိုပါခဲ့သလဲဆိုတာ… ကိုယ့်အရှေ့မှာ မွတ်စလင်တစ်ယောက်က တခြားဘာသာကိုစော်ကားရင် ကျနော်လည်း လက်ပိုက်ကြည့်နေမှာ မဟုတ်ဘူး… ရအောင်တားမှာပဲ…
ကျနော်လိုစိတ်မျိုးရှိတဲ့လူတွေ မြန်မာပြည်မှာ ဒုနဲ့ဒေးပါ… အဲဒီလိုပဲ ကျနော်တို့ ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာကို လာစော်ကားရင်လည်း အသက်ပေးပြီးကာကွယ်ဖို့ ၀န်မလေးကြပါဘူး… ဒါကြောင့် ၀ါးလုံးရှည်နဲ့သိမ်းကျုံးပြီး မခံချင်အောင်ပြောတာတို့၊ ဒေါသဆွပေးတာတို့ နိုင်ထက်စီးနင်းပြုတာတို့ မိုက်မိုက်ရိုင်းရိုင်း ရေးသားတာတို့ မလုပ်ကြဖို့ မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်…
အခုအချိန်မှာ နိုင်ငံက တိုးတက်ဖို့ စပြီး အရှိန်ယူနေတုန်းရှိပါတယ်… နောက်ကြောင်း ပြန်မလှည့်နိုင်ဘူးလို့ မပြောနိုင်ပါဘူး… ဒါပေမယ့် ဒီတခါနောက်ကြောင်းပြန်လှည့်တာ ပြည်သူထဲက ပြည်သူတချို့ကြောင့်ဆိုရင်တော့ ရာဇ၀င်ရိုင်းသွားပါလိမ့်မယ်…
Violence is initiated by those who oppress, who exploit, who fail to recognize others as persons, Not by those who are oppressed, exploited, and unrecognized.
It is not the unloved who initiate disaffection, but those who cannot love because they love only themselves.
It is not the helpless, subject to terror, who initiate terror, but the violent, who with their power create the concrete situation which begets the rejects of life.
It is not the tyrannized who initiate despotism, but the tyrants.
It is not the despised who initiate hatred, but those who despise.
It is not those whose humanity is denied them who negate humankind, but those who denied that humanity (thus negating their own as well).
Force is used not by those who have become weak under the preponderance of the strong, but by the strong who have emasculated them. – Paulo Freire
It is Ironic to learn that when the oppressed are finally freed from oppression,apart of the oppressed tends to become oppressor towards the rest parts.
ကျနော်တော့ ဒီကိစ္စမှာ ကြားနေပါတယ်။ မှန်တယ်လို့ ထင်ပေမယ့် ဒီလိုဆောင်းပါးတွေကို ဆက်တိုက်ရေးလို့တော့ မကောင်းဘူး ထင်ပါတယ်။ အခုထိတော့ သိပ်မလွန်ပါဘူး။ အခုကိစ္စက အတွေးအခေါ်ဆရာတွေနဲ့ ဆွေးနွေးတာနဲ့တောင် မတူတော့ဘူး။ Arkar11 ဆိုတဲ့လူလဲ တော်တော့်ကို အပြောကောင်းသားပဲဗျ။ ဘာတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဗုံးဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ တမန်တော်မြတ် မိုဟာမက် မွေးဖွားလာတဲ့နေ့မှာ စပြီး ကျရောက်ခဲ့တယ်ဆိုပဲ။ တယ်ဆိုတဲ့ စာပါလားဗျာ။
သူပြောတဲ့ ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ် ဆိုတဲ့အထဲက စာပိုဒ်တွေကိုတော့ သူကြီးကို မေးကြည့်ရအုံးမယ်။ သူက အဲဒါကို အလွတ်ကျက်ထားတယ် ပြောတယ်။ သူက နှံ့စပ်လို့ပါ။ သူ့ကို မုတ်ဆိတ်နဲ့ မာမွတ်ရှာပွတ်ဦးခိုင်လို့ ဆိုလိုခြင်း မဟုတ်ပါ။
ဟကောင်ရေ…နင်ကအငြင်းသန်သားပဲ…ဆင်ကြီးတွေ့ တာတောင် ခြေရာရှာပြနေတာပဲ…အိန္ဒိယကဟိန္ဒူ
တွေကို ဓားမိုးပြီးဘာသာမပြောင်းခိုင်းခဲ့ဘူးလို့ နင်မို့ မရှက်မကြောက်ငြင်းရဲတယ်။ ( deleted by Admin )
တိုတိုပဲပြောမယ်။ငါတို့ နိုင်ငံမှာ ၅%ပါဆိုတော့နင်တို့ ကငါတို့ လူမျိုးလား။ဒီလောက်လဲမကပါဘူး။ငါတို့ 
စိတ်ရင်းကောင်းနေလို့ နင်တို့ နေရတာ။နင်တို့ ( Deleted by Admin )
ငါတို့ နိုင်ငံကာကွယ်မယ်ဆိုတာ ( Deleted by Admin )
တောင်မယုံဘူး။အခုတောင် ငါတို့ အမျိုးကောင်းသားသမီးတွေကို ဖျက်ဆီးသတ်ဖြတ်နေတာ တိကျတဲ့ ဥပမာတွေပဲ။နင်တို့ မွတ်ဆလင်နိုင်ငံတွေ ဆော်ဒီ ၊UAEတို့ မှာစေတီတည်လို့ ရအောင်တောင်းဆိုပေးလေ။
နင်တို့ ဘာသာနဲ့ စစ်မဖြစ်ဖူးတဲ့ဘာသာရှိရဲ့ လား။တစ်မြို့ လုံးနဲ့ တစ်ယောက် တစ်မြို့ လုံးလွန်တယ်လို့ နင်
ပြောချင်တာလား။စပိန်နိုင်ငံကမှန်တယ်။ပြောရင်အများကြီးပဲ အမှန်တွေပြောရရင် နင်တို့ စောက်ရှက်ကွဲ
ပြီးကွဲ လူ့ ချဉ်ဖတ်ဖြစ်သွားမယ်။
သမိုင်းဆိုတာလိမ်လို့ မရသလို ဖင်ပိတ်ငြင်းလို့ လဲမရဘူးကွ။
ဟုတ်ပ…အပိုင်း(၃)ဖတ်မရပါလား။စကာမစပ် သဂျီးတို့ က ကုလားဆိုတဲ့ အသုံးတော်တော်မုန်းတာပဲ
နော်…အမြဲဖျက်နေပါလား။ဒါဆိုရင် မြန်မာ့သမိုင်းလဲပြဌာန်းစာအုပ်ပါသွားပြင်ပါဗျာ။ကျနော်တို့ 
တခြား ဘာမှတော့ ပြောစရာ မရှိဘူး ။
တစ်ခုပဲ ၊ အခု ကိုရင် မိုးတိမ် ရေးတဲ့
မြန်မာမှန်ရင်ဖတ်ကြပါ (၁) နှင့်(၂) က
အကြောင်းအရာတွေ ထပ်နေတယ် ၊
နောက်ပြီး ထေရဝါဒ လက်ကျန် တိုင်းပြည် ကလည်း ၊
နှစ် နိုင်ငံ ဖြစ်လိုက် သုံး နိုင်ငံ ဖြစ်လိုက် ဖြစ်နေတယ် ။
ကျစ်ကျစ်လစ်လစ် ပြန်ရေးသင့်တယ် ။
ထေရဝါဒ လက်ကျန် ခံစစ် တိုင်းပြည် ဆိုတဲ့ ၊
အယူအဆလေး ကိုတော့ ကြိုက်ပါတယ် ။
သူကြီးပြောတာလည်း မှန်တယ် ကိုမိုးတိမ်ပြောတာလည်း မမှားဘူးဗျ … ရွာထဲမှာလည်း ဒီလိုလူလေးတွေ ရှိမှ ရွာသာယာမှာပေါ့ အားလုံးက တရားတွေပေါက်ပီး လူကြီးတွေပဲလုပ်နေမယ်ဆိုရင် ရွာနဲ့မတူတော့ဘူး … နောင်တော်မိုးတိမ် စိုးရိမ်သလို ကျွန်တော်တို့လည်း စိုးရိမ်မိပါတယ် …သာသနာ နှစ် ငါးထောင် တည်မယ်လို့ ဘုရားဟောခဲ့တာ အခု နှစ်ထောင်းငါးရာကျော်ရှိနေပါပီ … ပုဂံက ရွှေစည်းခုံဘုရားကြီး သမိုင်းမှာတော့ သိကြားမင်းက အနော်ရထာကို နှစ်သိမ့်တဲ့ စကားမှာ ဒီနေရာဟာ သာသနာ နှစ်ငါးထောင်ရှိ တည်မြဲဦးမယ် ဆိုတာပါပါတယ် …. မြန်မာတွေ အားနာတယ် ယုံလွယ်တယ် အထင်ကြီးတက်တယ် သနားတက်တယ် … ကြာလာရင် မြန်မာတွေ အိမ်ပါမယ် လူပါမယ် ဘာသာပါ ပြောင်းကုန်မယ် … ခံစစ်ပဲ ပိတ်ကစားရင် တစ်ချိန်ချိန်တော့ ဂိုးသွင်းခံရမှာပဲ … အဲဒါဆိုရင် ရှုံးဖို့က သေချာတယ် .. တစ်ခါတစ်လေ ကစားကွက်လေးပြောင်းပီး တိုက်စစ်လေး ကစားရင် ကောင်းမယ်ထင်တယ် … မြန်မာနိုင်ငံမှာ တိုက်စစ်မှုးတွေ အများကြီး လိုအပ်နေတယ် .. သာသနာမကွယ်ပျောက်အောင် ထိန်းသိမ်းဖို့ မြန်မာလူမျိုး ဗုဒ္ဓဘာသာတိုင်းမှာတာဝန်ရှိတယ် ….
ကျုပ်တို့အားလုံးဟာ မိမိတို့ယုံကြည်ရာ မိမိတို့၏ ဘုရားရှင် ကို
( သဂျီးမင်းပစ်နေကြ လက်နက်ကြီးကတော့
တရားကိုမြင်ရင် ငါဘုရားကိုမြင်တာနဲ့ တူတူဘဲ ဘာညာပေါ့ဗျာ )
နောက်တစ်ခုက ဘုရားရှင်တွေဆိုတာက ငချဉ်တွေမဟုတ်ဘူးဗျ ဘုရားတွေ
ဖန်ဆင်းရှင်ယုံကြည်မှု့ဘာသာဝင်တွေဖက်ကနေဆိုရင် လောကကြီးနဲ့ ခင်ဗျားတို့ကို
ဖန်ဆင်းထားတာ ကျမ်းစာတွေကို မျောက်ခြောက်သလို လာလုပ်ပြလို့ကတော့ သနားတယ်
( တစ်ခုရှိတာက ဖတ်ဆင်းတဲ့နောက် ဘဲ့နှယ့် အားလုံး အယူတစ်မျိုးတည်းဖြစ်အောင် မဖန်ဆင်းပါလိမ့် )
ပြဿနာက သက်ဆိုင်ရာအခြား ဘာသာရေး ကျမ်းစာတွေမှာ ဘယ်လိုရေးထားကြတယ် မသိပေမယ့်
ဗုဒ္ဓ ပိဋကတ်တော်တွေမှတော့ မကြည်တဲ့ကောင်တွေကို ဖဲ့ကွာ လို့ တစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတာကတော့
( တစ်ခုတော့ရှိတာပေါ့နော ကောသလ မင်းကြီး မြတ်စွာဘုရားရှင်ကျောင်းတော်နား ဒိဌိ တွေကို
အကြံဖန်လုပ်ပြီး ဒိဌိကျောင်းဆောက်ခွင့်ပေးတုန်းကတော့ မြတ်စွာဘုရားရှင် က တပည့်တွေကို
ဖျက်ခိုင်းတယ်လို့ စာထဲပါတယ်ပြောကြတာဘဲ ဘယ်အပိုဒ်လည်းမသိဘူး ( သိတဲ့လူ ညွှန်းဂျဇမ်းဗျာ )
ပြောခြင်တာက ဗုဒ္ဓတရားတော်ထဲက သက်ဆိုင်ရာ ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ အာသဝေါ ကုန်ခန်းခြင်းသဘောမှာ
ရှိတဲ့ ရဟန္တာစိတ်ထားတွေက သိပ်နူးညံ့တာ အဲ့သည်တုန်းက ချတယ်ဖိုက်တယ်ပါတာမဟုတ်ဘူး
သဘောအရ ကိုယ့်နယ်ထဲ ဗိုလ်လာကျလို့ လုပ်ခိုင်းတဲ့သဘောလည်းရှိတယ် )
သက်ဆိုင်ရာ ဘုရားကျမ်းစာထဲမှာ ဘုရားဆိုတဲ့ဘုရားကနေပြီး မကြည်တဲ့ကောင်ကို ဖဲ့ကွာလို့
ဆုံးမထားရင်တော့ အဲ့သည်ဘုရားဆိုတာရော ကျမ်းစာဆိုတာရောဟာ
လက်ရှိ ဘာသာရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သတ်နေဖြတ်နေကြတာကတော့
ဘုရားကလုပ်ခိုင်းတာလား ကိုယ့်ဖါသာ ဖင်ယားတာလားဆိုတာကတော့ ကိုယ့်ကိုယ်သိကြမယ်ဘဲထင်တယ်
မြန်မာပြည်မှာလည်းရှိတာဘဲ ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီတွေ ပလီတွေကို ဖျက်တာ
ဒါကတော့ ဗုဒ္ဓအဆုံးမဖက်က လုံလုံးဆန့်ကျင်တဲ့လုပ်ရပ်ဘဲလို့
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်တဲ့ ကျုပ်က ပြတ်ပြတ်သားဝေဖန်ပါတယ် လုပ်တဲ့လူအပြစ်ဘဲ ဗုဒ္ဓအဆုံးအမ မဟုတ်ဘူး
အခြားဘာသာတွေ ဗုဒ္ဓအဆောက်အဦးတွေကို ဖျက်တာကတော့ ဘယ်သူ့အဆုံးအမလည်း ဆိုတာ
ကိုယ့်ဖာသာ ဝေဖန်သုံးသပ်နိုင်ကြပါစေ ကိုယ့်ဖါသာ ဝေဖန်ပါ
တစ်ခုရှိတာက ဆိုခဲ့ပြီးသလို မမြင်ဘူးတဲ့ ဘုရားတွေကို ယုံကြည်တဲ့သူခြင်းအတူတူ
မိမိတို့ယုံကြည်ရာ ဘုရားရှင်တွေရဲ့ အဆုံးအမတွေဟာ ယနေ့လူသားတွေရဲ့
ခေတ်သဘောတရား အယူအဆ ဥပဒေတွေနဲ့ ဆန့်ကျင်ဖီလာဖြစ်ရင်တော့ ဘုရားမကလို့
အထူးပြောခြင်တာက ဖင်ယားတဲ့သူကသာ ယားနေတာ
နောင်အနာဂတ်မှာ ( အိုင်တီခေတ်ကြီးမှာ ) ဘာသာရေးဆိုတာကို ဘယ်သူက စိတ်ဝင်စားမှာလည်း
အမျိုး၊ဘာသာ၊သာသနာဆိုပြီး.. ခေါင်းစဉ်ကြီးကြီးထိပ်တင်တတ်ထားတဲ့ နိုင်ငံမှာ..
အစွန်းရောက်တွေဒေါသထွက်အောင်.. ချွန်တွန်းလေးသာလုပ်ပြီး.. “လစ်”သွားလိုက်..
( အခု.. ကိုရင်မိုးတိမ်လုပ်သလိုပေါ့..)
ဒါပေမယ့်.. အခုထိဆွေးနွေးရေးနေသူတွေအထဲ.. မထင်ရလောက်အောင်.. အဆင့်အတန်းရှိနေတာမို့.. ရေးသူအားလုံးကို.. ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း..
ကျုပ်က ဘာမှချွန်တွန်း မလုပ်ပါဘူး။မလုပ်ချင်လို့ကို ခင်ဗျားဂျီးကို ဖျက်ဖို့ post တွေကို အတန်တန်ပြောခဲ့ပါတယ်ခင်ည။ကျုပ်ဟာကျမှ ခင်ဗျားမဖျက်အောင်တောင်ကြိုတင်တောင်းပန်ပြီးမှ တင်ခဲ့ရတာပါ။
ညမှအားတာရော ကွန်နက်ရှင် နက်နန်းကြောင့်ရော ဆိုပါစို့……
ခင်ဗျားမေးတာ ထဲမှာ ဘုရားရှင်က မဖျက်ခိုင်းပါဘူး။ကောသလမင်းကြီးက မသင့်တော်မှန်းသိမှ
သူကိုယ်တိုင်ဖျက်ခိုင်းခဲ့တာပါဗျာ။သူကလဲပေါ့သေးသေးမဟုတ်ဘူးဗျ ဘုရားလောင်းစာရင်းထဲပါပါတယ်။နာလာဂီရိဆင်လဲ ပါပါ၏။အချိန်မရှိလို့ ကျုပ်မရှာနှိုင်တော့ဘူး။
ကိုယ့်ဘာသာရှာကြည့်ပါ ကျုပ်အိပ်ချင်ဘီ။အလုပ်တွေက မနားရသေးဘူး တော်ဘီ…..
သီးခံတယ်ဆိုတာ ပုထုဇင်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေအတွက်တော့ အကန့် အသတ်ရှိပါတယ်
သိပ်လွန်လာရင်တော့ တုံ့ ပြန်မိမှာပဲလေ
by the way ; Beware the fury of patient man
သဂျီးကို အရင်ရှင်းပါ့မယ်။ခင်ဗျားက ဖတ်မရတဲ့(ပို စ့်)တွေကျ မဖျက်၊ကော်မန့်တွေ ပိတ်တာကတစ်ချက်၊
အစ္စလမ်မစ်အစွန်းရောက်တဖွဲ့ဖွဲ့က.. မန်းဂဇက်..ကိုဗျင်းမှာကျတော့ကြောက်နေပြီး ဗမာတွေ မကြိုက်တာကျမကြောက်ဘူးပေါ့လေ။ဘာကူညီပေးရမလဲ ပြောပါ။ကျန်တာကတော့ ရွာသားတွေခင်ညားကြီးကို ဝိုင်းပြောပြီးဖြစ်ပါကြောင်း။
သဂျီးက သူမကြိုက်တဲ့စာတွေဖတ်နေရတယ်လေ။နားလည်ပေးလိုက်ပါခင်ဗျာ ကျေးဇူးပါ။
သူက သောက်ကုလားတွေပဲကြောက်နေတာလေ မင်းတို့ကမလုပ်မှန်းသိသကိုးဟ
ကျုပ်ကိုအခုသိရင် အခု ဟာလာလုပ်ချင်နေတာပါ။မယုံမရှိပါနဲ့။
နောက်ပိုင်းတွေမှာပါပါလိမ့်မယ်။ခင်ဗျားဟာက နောက်ပိုင်းတွေမှာဖတ်ရင်းနဲ့ရှင်းသွားမှာပါ။တစ်ခုတော့ပြောပါရစေ ခင်ဗျားတို့ညီနောင်တွေက စစော်ကားတာပါခင်ဗျ။အေးအေးနေကြရင် ဒီလို post မျိုးတွေရွာထဲမရောက်ပါဘူး။အခုတော့မဟုတ်တာတွေလာတင်လွန်းလို့ သောက်ညင်ကပ်လို့ ပြန်တင်တာ
@San Hla Gyi
အဟားးး ကိုစံလှကြီးတကယ့် ဘလက်ဘရားသားဂိုဏ်းဝင်တွေကို ပြန်ဆော်တာမှာ ခင်ဗျားမပါရင်ပွဲဘယ်စည်မတုန်းဗျ။သူတို့ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုလုပ်လို့ကျနော်ကပြန်ဗျင်းရတာပါ။
ကျေးဇူးပါအဘရေ။လမ်းခရီးကောအဆင်ပြေရဲ့ လားခင်ဗျ။ကျွန်တော့် အတွက်ဘာလက်ဆောင်တွေပါသတုန်း။
ခင်ဗျားနဲ့ စိတ်ဓါတ်ချင်းအတူတူပါပဲခင်ဗျာ။အာဒါကို လူတိုင်းမသိလို့ ဝင်ဗျင်းနေရတာပါ။
ကျုပ်ဒီရွာကို ထိမ်းသိမ်းရတာမှာ.. ဘာတွေဘယ်လောက်လုပ်ထားသလည်း.. ခင်ဗျားမသိပါဘူး..
“ဘာကူညီပေးရမလဲ ပြောပါ” မေးထားတာမို့.. အကူအညီတောင်းပါရစေ..
တကယ်တော့.. ကူညီတယ်ဆိုတာထက်.. ကိုယ့်တာဝန်ကိုယ်ယူဖို့ပါပဲ..။
.. ကိုရင့်အိုင်ဒတတီ( ဓါတ်ပုံ၊မှတ်ပုံတင်နံပါတ်၊ လိပ်စာ) မင်န်ဘာပရိုဖိုင်းမှာ ဖေါ်ပြပေးစေလိုပါတယ်..။
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ကို.. အယ်ဒီတာတယောက်အနေနဲ့.. (လုံးဝ) လုံးဝကာကွယ်ပေးပါ့မယ်..။
နောက်တခုက.. ကိုယ့်အရည်အချင်းနဲ့.. ဆဲဆိုတာ.. သူတပါးထိခိုက်တာမပါပဲ.. ကိုယ်ပိုင်စာကိုချရေးဖို့ပါပဲ..
ဒီရွာရဲ့.. အဓိကရည်ညွှန်းချက်.. slogan က..
“မတူသောအတွေးနဲ့ တာဝန်ယူရဲသောကိုယ်ပိုင်စာ ချရေးပါ…” တဲ့..။
ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပါတ်သက်.. ရောက်ရှိတဲ့နေရာကို.. စောင့်ရှောက်ပေးပါ..။
…. အတူတူပြောဆိုဆွေးနွေးခဲ့သူတွေကို.. ထိုက်သင့်တဲ့.. အပြန်အလှန်.. နားလည်လေးစားမှုရှိပေးပါ..။
ဒီရွာကို.. မစောင့်ရှောက်နိုင်ရင်တောင်.. မဖျက်စီးချင်ပါနဲ့..။
တခြားသူလုပ်အားတွေ.. မနှမြောရင်နေပါ..။ ကိုယ့်လုပ်အားကိုတော့.. ကိုယ်တိုင်..ခံစားကြည့်ပြီး.. နှမြောကြည့်စေလိုပါကြောင်း..။
( ကိုရင့်ကို ဒီလိုရေးဖို့.. 2012/05/09 at 7:58 pm ကစပြီးကိုရင်ရေးထားတဲ့.. ကွန်မန့် ၃၀၇ခု..အကုန်ပြန်ဖတ်ထားပါတယ်..။
အဲဒါလေး… :harr: )
(ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ကို.. အယ်ဒီတာတယောက်အနေနဲ့.. (လုံးဝ) လုံးဝကာကွယ်ပေးပါ့မယ်..။)
ဟုတ်ကဲ့ သဂျီးလုံးဝ မယုံပါကစပါမယ်။ဟာလာလုပ်ဖို့စောင့်နေသူတွေက သဂျီးကအစဆိုတာလဲ
သိပါ၏။လုံးဝ မပေးနှိုင်ပါ တရားဝင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပါဒယ်။ခင်ညားဂျီးကျုပ်ကိုထုတ်ချင်လဲ
ထုတ်ပလိုက်ပါ။ကျုပ်ဒီရွာကို မဖျက်စီးချင်လို့ မီဒီယာကိုမီဒီယာနဲ့ပြန်ဗျင်းနေတာပါခင်ဗျား။
တိုက်ချင်စိတ်မရှိပါ။ ဘယ်မန်ဘာကို … ကိုရင့်အိုင်ဒတတီ( ဓါတ်ပုံ၊မှတ်ပုံတင်နံပါတ်၊ လိပ်စာ) အဲလိုတောင်းဖူးလဲသိချင်ပါတယ်??????။အဲဒါ ဘယ်သူရေးရေးအမှန်တွေမို့ တင်ပြရတာပါ။
အမေရိကားလိုနိုင်ငံတောင်.. အမေရိကန်တယောက်ထုတ်လုပ်တဲ့.. တမန်တော်မိုဟာမက်စော်ကားထားတဲ့.. ဗီဒီယို ယူတုပေါ်တင်လို့.. အစွန်းရောက်မွတ်စလင်တွေ.. ပြဿနာရှာ.. သံအမတ်သတ်.. လူတွေလိုက်သတ်တာ..
ကိုရင်မိုးတိမ်က.. ဘာမို့.. မန်းဂဇက်က..ဘာမို့.. ကျုပ်က..ဘာမို့လည်း…နော..။
အစ္စလမ်ဘာသာဟာ.. ကမ္ဘာဘာသာကြီး ၃ခု( ဂျူး၊ ခရစ်ယန်၊ ဟိန္ဒူ) နဲ့ထိပ်တိုက်တွေ့နေတာ.. နှစ်ထောင်ချီနေပြီ..။ ဆက်ပြဿနာတွေတက်နေဆဲပဲ..။
ရှေ့က ဘာဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့.. အခုလောလောဆယ် ခေတ်မှာ.. ဗုဒ္ဓဘာသာက.. အလွတ်ကြီးနေနေနိုင်တယ်..။
( ရှိတာမှ.. ကမ္ဘာ့ဘာသာကြီး၅ခုလောက်ကိုးနော့..)
အလွတ်ကြီးနေရင်း… စီပွားရေးအင်အားကောင်းအောင်လည်းလုပ်လာကြတာ.. အခု..ကမ္ဘာ့ဒုတိယ၊တတိယ စီးပွားရေးအင်အားအကောင်းဆုံးနိုင်ငံတွေ( ချိုင်းနား၊ ဂျပန်)က.. ဗုဒ္ဓဘာသာအများစုနိုင်ငံတွေပဲ..။
တခြားဘာသာကြီးတွေက.. ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံတွေကို.. ဒီပြသနာတွင်းထဲ ဆွဲသွင်းဖို့ကြိုးစားနေကြကောင်း… ကြိုးစားကြပါလိမ့်တယ်..
ချောင်တဲ့အပေါက်ရှာရင်း.. မြန်မာပြည်အနောက်ကမ်းကို.. သတိပြုမိကောင်း.. သတိပြုမိသွားပါလိမ့်မယ်..။
(အသိမမှားရင်).. မြန်မာစစ်တပ်နဲ့..သူ့ခေါင်းဆောင်တွေက.. ဒါမျိုးတွေကို.. ကောင်းကောင်းကိုင်တွယ်တတ်တယ်..။ ကိုင်လည်းကိုင်တွယ်ခဲ့တယ်..။
ဒီပြသနာဟာ.. တက်လာပြီဆိုရင် နှစ်ထောင်ချီရှင်းလည်း.. ပြီးမယ့်ပြသနာမဟုတ်ကြောင်း..
မြန်မာပြည်ကြီးကို.. အမျိုးဘာသာသာသနာကို.. “ငါကယ်တင်ခဲ့သည်”.. လုပ်လို့မရပါကြောင်း…
ဘယ်မန်ဘာကိုမဆို ကျုပ်ကိုမရိုင်းစိုင်းရင် လေးလေးစားစား ဆက်ဆံခဲ့တာကို သဂျီးပြန်ဖတ်ပြီးရင်တွေ့မှာပါ။
ကျွန်တော် ရိုင်းရိုင်းဆက်ဆံခဲ့ရင်လဲ အဲဒီ post တွေပြန်ဖတ်ကြည့်ပေးပါ။ရိုင်းသင့်တယ်ထင်မှရိုင်းခဲ့ပါတယ်၊
မရိုင်းသင့်ရင် မရိုင်းခဲ့ပါဘူးခင်ဗျ။ကျုပ်ဘက်ကဘာမှမစခဲ့ပါဘူး သေသေချာချာဖတ်ကြည့်ပါ ခင်ဗျာ။ကျုပ်စရိုင်းခဲ့တာရှိရင် ပြောပါအားမနာပါနဲ့။သူတို့စော်ကားနေတာကျသဂျီးကဆိုတော့မပြောဘူးနော။သဂျီးလဲတစ်ခုမေးလိုက်ချင်ပါတယ် မြန်မာနိုင်ငံကို ဘယ်နေ့ ဘယ်နာမည်ဘယ် passport နံပါတ်နဲ့ပြန်လာမလဲ သိချင်တယ်ခင်ည။ဟုတ်ကဲ့ လာကြိုချင်လို့ပါခင်ဗျ။ဘာကောင်မှတော့မဟုတ်ပါဘူး
ကိုမိုးတိမ် — အပိုင်း (၃) ကိုပါ ဖတ်ပြီးပါပြီ။ ဘာမီးယန်း ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ကို ဖျက်ဆီးတာက မူဆလင်လို့ ခြုံပြောထား ပေမယ့် တာလီဘန် အစွန်းရောက်တွေပါ။ တစ်ကမ္ဘာလုံးက သမိုင်းပညာရှင်တွေ တားမြစ်နေတဲ့ကြားက TNT အားပြင်းယမ်းသုံးပြီး ဖျက်ဆီးခဲ့တာပါ။ ဒီလုပ်ရပ်ဟာ သူတို့ဘယ်လောက်ညံ့ဖျင်းမှန်း သိသာစေပါတယ်။
အယ်ဒီတာကိုလေးစားပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်။ ဒေါသရှေ့ပြေးလွန်းရင် ဦးနှောက်ကမထွက်တော့ လိုရာရောက်နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ကိုမိုးတိမ် ရေးတာကို အားလုံးက အသံတိတ်အားပေးနေကြမှာပါ။ ဒီကိစ္စတွေဟာ ပြဿနာများလွန်းလို့ အားလုံးက အသံတိတ်ပြီးနေပေးနေကြတာပါ။ အိမ်မှာတောင် မောင်းတောက ထွက်ပြေးလာတဲ့ ရခိုင်မိန်းကလေးကို လက်ခံထားပြီး အလုပ်ရှာပေးနေရတယ်။ ဒီမိန်းကလေးက ရခိုင်မပြန်ရဲဘူး။ ကြောက်လွန်းလို့။ ဒါလောက်ဆို ကိုမိုးတိမ် သိလောက်ပါတယ်နော်။
ဟုတ်ရဲ့ လား…ဘာအလုပ်ရှာပေးထားတာလဲပြောပါဦး…အဲလိုပြောကြကြေးဆိုရင် ကျနော်လဲ ကုလားမအပေါင်း အလုပ်ရဖို့ ကူညီနိုင်ပါသဗျ….ဟာ ဟ
ka tootyo says:
ဘာသာရေးအစွန်းရောက် တွေ ရှိနေသ၍ မိမိ အမျိုး ဘာသာ သာသနာ ကာကွယ် ရမှပါ ။ သူတိုဘာသာ က သိမ်မွေ့ တယ် ဆို ရင် … ကိုယ် လဲ တရာထိုင်ပြီး အေးဆေးနေ ပါတယ် ဗျာ ။
ဟုတ်ကဲ့ပါ ဆရာမ ဝင့်ပြုံးမြင့်ခင်ဗျား
တာလီဘန်ကလဲ ဘယ်ဘာသာတွေပါလဲ။သိပ်သိသာနေပါတယ်ခင်ဗျ။ကျွန်တော်ပြောတာ လွန်လား၊မလွန်လားကို ဆရာမအိမ်က ကောင်မလေးကိုမေးကြည့်ရင် ပိုပြီးတိတိကျကျသိရမှာပါ။
@ka tootyo ရေ
အားပေးတာကျေးဇူးပါခင်ဗျ။အပိုင်း(၃)ပါ ဖတ်ပေးပါဦး။၄ ၅ ၆…….တင်ရင်နည်းနည်းကြမ်းတော့မှာမို့
စဉ်းစားနေပါတယ်။ကျွန်တော်လဲ အေးဆေးနေချင်ပါတယ်။သူတို့မှာ အစွန်းရောက်နဲ့ မရောက်သူ ဆိုတာပဲရှိပါတယ်။ဖျက်ဆီးဖို့ကတော့ အသင့်ပါပဲခင်ဗျ။
ကျုပ်တင်တဲ့ အပိုင်း(၃)ကို ကျုပ်ဝင်ဖတ်မရတော့ဘူးခင်ည။
You don’t have permission to access /about/contact-us on this server.
ကျုပ်တင်တဲ့စာကို ကျုပ်တာဝန်ယူချင်ပါတယ်။တာဝန်ယူ ရှင်းချင်ပါတယ်ခင်ည။အရှက်မရှိ တာဝန်မယူရဲတဲ့
ကောင်ထဲမပါပါဘူး။မိုက်ရိုင်းတာလဲမပါ၊စော်ကားထားတာလဲမရှိပါဘူးခင်ဗျ။အခု ကော်မန့် ၉ ခုတက်နေပါတယ်။ကျုပ်ကိုဘာပြောလဲ ကျုပ်ပြန်မကြည့်ရတော့ဘူးပေါ့။အော် လစ်ဘရယ်ဂျီးရယ်…..
ကိုယ်တိုင်ရေးလည်း မဟုတ်တဲ့.. အဲဒီစာတွေ.. လာကူးမတင်ပါနဲ့..။
အဲဂဒါ ကိုယ်ပိုင်ရေးမဟုတ်ဘူးလို့ ဘယ်ကောင်ပြောပါသလဲ။
မြန်မာနိုင်ငံကို ချစ်တဲ့၊ဖော်ပြလို့ မရလို့သာ blog ထဲမှာရေးရတာကို လေးစားသင့်ပါတယ်။
ဒီရွာမှာတင်တာလဲ ဟိုဘက်ကလွန်လာလို့ အကုန်သိစေချင်လို့တင်တာပါ။သဂျီးကျုပ်တစ်ခုချင်းတင်
တာကျပြောတတ်လိုက်တာ။ဟိုကောင်တွေဘက်ကျ အသံတိတ်နေတဲ့အပြင် အားပေးအားမြှောက်တောင်လုပ်ပေးသေးပါလား။ခင်ဗျားလစ်ဘရယ်လူဂျီးပါ။
အဲကောင်တွေလစ်ဘရယ် မကျပုံကို နံပါတ် ၄ အနေနဲ့ ထပ်တင်ပါရစေ။ခဏတော့စောင့်ပါဦးဗျ။
မကြာခင်လာမည်ပေါ့ဗျာ။သိပ်လွတ်လပ်ခွင့်တောင်းနေတဲ့ ကောင်တွေက ခင်ဗျားရဲ့ လွတ်လပ်တဲ့
ဆိုဒ် ကြီးကို ဘာကြောင့်တိုက်ရသတုန်း။အမှန်အတိုင်း ရှင်းပြနေတာပဲလေဗျာ။မိန်းကလေးတွေဘောလုံးကန်တာတောင် ဘယ်လိုကန်ရလဲခင်ဗျားမြင်ပါတယ်။အဲဒါလွတ်လပ်ခွင့်ပေါ့လေ (လစ်ဘရယ် အတော်ကျတာပဲနော)မမျှတဘူး ထင်လာရင် ဝင်ဗျင်းမယ့်ကောင်တွေမြန်မာနိုင်ငံမှာ ကျန်နေပါသေးတယ်ခင်ဗျ။မဟုတ်ကဟုတ်ကကျုပ်ကတင်နေတာလဲမဟုတ်ပါဘူး။အမှန်အတိုင်း
ရေးတင်တာပါ။တစ်ခုတော့တောင်းဆိုပါရစေ။ဟိုဘက်ကမဟုတ်တာတွေ ဖျက်ပေးရင် ဆက်မတင်တော့ပါဘူးခင်ဗျာ။ပြီးလူတိုင်းဖတ်ဖို့ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ဖွင့်ပေးပါ။ဘယ် ပိုစ့် မဆို လူတိုင်းဖတ်သင့်ပါတယ်။အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာတောင် စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်ရနေပါပြီ။
“မြန်မာမှန်ရင်ဖတ်ကြပါ။(၁) “မှာ ကိုရင်ဒီလိုရေးထားခဲ့တယ်..
ကိုရင်က.. ကိုယ့်စကားတောင်ကိုယ် တာဝန်မယူနိုင်ပါလား..
ကျုပ်ကို ဘာ point မှပေးစရာမလိုသလို ဘာကော်မန့်မှမဖျက်ပါနဲ့။ကျုပ်ကလဲရှင်းချင်လို့ပါ။
brain strong ပေါ့ဗျာ။ကျုပ်ကကူးချထားတာဗျ။http://www.islamvirus.blogspot.com
သွားဖတ်ကြပါဆိုရင်ဘယ်ကောင်မှ မဖတ်လို့သိရအောင် အလွယ်တစ်ခုချင်းစီ စတင်ပြီခင်ည။
နောက်တခုက.. ဟိုကောင်တွေ..ဟိုဘက်တွေနဲ့.. လက်ညိုးမထိုးနေပါနဲ့..
ကျုပ်ဖျက်လိုက်လို့.. ကိုရင်မိုးတိမ်အပါအ၀င်.. ရွာသူားတွေ.. သိတောင်မသိ.. မြင်တောင်မမြင်လိုက်ရတဲ့ ပို့စ်တွေ..ကော်မန့်တွေအများကြီး.. ။
ကော်မန့်ပိတ်တယ်ဆိုတာကလည်း.. ပို့စ်တင်သူကိုယ်တိုင် ကော်မန့် ပိတ်ပြီးမှ တင်လို့ရတယ်ဆိုတာတောင် မသိလေရော့လား..။
ကိုရင့်ကို အခွင့်တခုပေးမယ်..။ အပေါ်ကစာတွေ.. ကိုယ်တိုင်ရေးတာဆိုရင် ဆက်တင်ပါ..။
ဒါပေမယ့်.. သူများဘာသာသာသနာ “စာလုံးတွေနဲ့” မစော်ကားပါနဲ့..။
သူများဘာသာသာသနာက ကိုယ့်ယုံကြည်မှုစော်ကားလာရင်လည်း” လေအားဖြင့်” အော်မနေပါနဲ့..။
ဘယ်လိုလုပ်ကြသလည်း သိချင်ရင်.. အပေါ်မှာတင်.. ကော်မန့်ရေးနေတဲ့.. ရွာသူားတွေရှိတယ်..။
ကိုရင် မိုးတိမ် ရဲ့စာကို အဘ တို့လည်း ဒိုင်ခံ ဖတ်နေပါတယ် ။
ကိုယ့် အမျိုး ဘာသာကို သိစေချင် သတိထားစေချင် လို့ရေးတဲ့အပိုင်းက OK ပါ ။
ဒါပေမယ့် ၊ သူ့ အမျိုး ဘာသာကိုတော့ ဒဲ့ကြီး မစော်ကားစေလိုပါဘူး ။
သူတို့ လွန်နေ မှားနေတာ ရှိရင် ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး ထောက်ပြတဲ့အထိကို လက်ခံနိုင်ပါတယ် ။
၁ ။ မှန်ကန် သေချာတဲ့ အချက်အလက်ကိုပဲ ဦးစားပေးစေလိုပါတယ် ။
၂ ။ မသေချာတာ နှင့် ကိုယ့် ခံစားချက်တွေကို ထည့်မိရင် တစ်ဖက်က ပြန် ထောက်ပါလိမ့်မယ် ။
၃ ။ ဘာသာရေး ပြဿနာ ဖြစ်လောက်အောင်လဲ မကြမ်းစေချင်ပါဘူး ။
ပထမ တစ်ခါတုန်းက MG ကပုံတွေကစတယ်လို့ အတင်းချခံရသေးတာ ၊
ဒုတိယ တစ်ကြိမ် ( ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ ) MG နှင့် မပါတ်သက်စေချင်ပါကွယ် ။
၄ ။ သူကြီးခမျာလည်း သူ့ ငွေ အချိန် လုပ်အား နှင့် ဂုဏ်သိက္ခာ တွေ
ရင်းနှီး မြုပ်နှံထားရတဲ့ MG ကို မပျက်စီးလိုတာကို နားလည်ပေးလိုက်ပါ ။
အဘ တို့မှာ ငွေမပါ လေချည်းပဲ ရင်းခဲ့တဲ့သူတွေတာင် ( ပိုစ့် ၈၇ ခု ရှိခဲ့ပြီ ) ၊
MG ကိုသံယောဇဉ်ရှိ ပျက်စီးမှာ နှမျောနေမိသေးတာပဲ ။
အပိုင်း (၃)ကိုဖတ်မရဘူးဖြစ်နေတယ် Forbidden ပဲပေါ်နေတယ်။ (၁) နဲ (၂) ကိုတော့ ဖတ်ပြီးပြီ ကိုမိုးတိမ်ရေ ဘာပဲပြောပြောအလကားနေရင်းချချင်သတ်ချင်ဖြတ်ချင်နေတဲ့ဒီဘာသာကိုမကြိုက်ဘူးဗျာ အမျိုးဘာသာ သာသနာအတွက် ဘာမှမကောင်းဘူး လောကီကောင်းကျိုးလဲမဖြစ် လောကုတ္တရာကောင်းကျိုးလဲမဖြစ်တဲ့ဒီဘာသာကိုမကြိုက်တာတော့အမှန်ပဲ ပြီးတော့ ဘာသာထဲမှာဘယ်ဘာသာမှသူတို့လိုမဆူညံဘူး အတိုက်အခံဂျီဟတ်စစ်ပွဲတွေဆင်နွှဲမနေဘူး သူတို့ပဲ အဲဒီတော့တဘောင်ရှိခဲသလိုပဲ ( deleted by Admin ) ငါးမစားရနေပါစေဗျို့ ………
ကျုပ်ခင်ဗျားရေးတဲ့ အပိုင်း ၃ ကိုဖတ်လို့မရတော့ဘူးဗျို့။ ကျုပ်ပြောခဲ့သလိုပဲ ကျုပ်တို့က ရွာသားကြီးတွေ ရွာသူကြီးတွေ မဟုတ်တော့ ဖတ်လို့မရဘူးဗျို့။ ကျုပ်စိတ်ပျက်တာ အဲဒါလည်း ပါတယ်။ နောက်ပြီး အဲဒါက ဘယ်လို အမှတ်ပေးစည်းမျဉ်းနဲ့ သတ်မှတ်တာလဲ မသိဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျုပ်စိတ်ထင် ကွန်မန့်ပေးတဲ့ တချို့က ရေးတဲ့ပို့စ်ရော ရေးတဲ့ကွန်မန့်ရော ဒီလောက်ကြီး မများပေမယ့် အမယ် ရွာသားကြီးတွေ ဘာတွေ ဖြစ်လို့ဗျ။ ပြောဖို့ကျတော့လဲ သမာဓိတရားရှင် ပေါင်ချင်းခိုင်ရဲ့ သမာသမတ်ကျပုံကို သိတော့ ပြောရခက်နေပြန်ရော။
နဖူးမှာလည်း လခြမ်းတံဆိပ်နဲ့လေ။ အမှန်တော့ ကျုပ်လဲ ဒီထဲကတချို့ ပြောတာကို သဘောကျတယ်။ သူတို့ကို မတိုက်ခိုက်ရင် ဒီဆိုဒ်ကို မတိုက်ဘူးဆိုတဲ့ သဘောတူညီချက် ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ သဘောဖြစ်နေတယ်။ သူတို့ကို ပုတ်ခတ်သည်ဖြစ်စေ မပုတ်ခတ်သည်ဖြစ်စေ သူတို့က ဖျက်ချင်ရင် အချိန်မရွေးဖျက်နိုင်တယ် ဆိုတဲ့သဘောပါလား။ ပြောတော့ ဒီဘလက်ဘရားသားတွေက သူတို့ တမန်တော် ပေါ်ပြီးကတည်းက ငြိမ်းချမ်းရေးဗုံး ပေါက်ပြီးသားလူတွေဆိုတော့ ဒီလောက် အမြင်ကျဉ်းမယ် မထင်မိဘူး။
ကိုမိုးတိမ်ရေ ကျုပ်က ကြားနေမယ်လို့ဆိုတာ ဒီလိုပါ။ ကျုပ်က အတိုင်းအတာရှိတယ်လို့ ထင်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့က တပုဒ်ရေးရင် ကိုယ်လဲတပုဒ်ရေးဆိုတဲ့ သဘောမျိုး ပြောတာပါ။
လူတွေက အမျိုးမျိုး စိတ်က အထွေထွေ ဆိုတော့ တိုင်ပတ်နေကြမှာပါပဲဗျား ….။
အပေါ်က ရွာသူတယောက်ပြောသလို တာလီဘန်တွေလုပ်တာ ဆိုပေနဲ့
ဘာမဟုတ် ညာမဟုတ် ခြေသလုံးအိမ်တိုင်တွေကပါ ပထွေးတွေကို ရွှေခွက်နဲ့
ဖြစ်သင့်ဖြစ်ထိုက်ရင် ဖြစ်လာတော့မဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ဘယ်သူမှ
ဘယ်နည်းနှင့်မှ တားနိုင်မယ် မထင်မိပါ ….။
သဂျီးလဲ တားနိုင်မယ် မဟုတ်သလို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်တဲ့
ကျုပ်တို့အနေနဲ့ကလဲ သည်းခံကြပါ … ကံ ကံ၏ကျိုး …
သူလုပ်ရင် သူခံရမယ် လုပ်နေခြင်းဖြင့် စုံလုံးကန်းဘဝ သို့ရောက်ရှိသွားနိုင်ပါကြောင်း …
သဂျီးပြောသလို မြန်မာပြည်သူပြည်သားများ နောက်ကျနေပြီဖြစ်ပေမဲ့
သတိ …. သတိ …. သတိ ပြုကြရတော့မည် ဖြစ်ပါကြောင်း….။
ကျေးဇူးပါပဲခင်ဗျ။လာအားပေးသွားတာကို။ခင်ဗျားလဲ ဇ ပြင်းသကိုး ဖြေးဖြးလုပ်ပါ ကိုယ့်လူရ
ကျွန်တော် တစ်လုံးမှဆဲတာ၊မိုက်ရိုင်းစော်ကားထားတာ မပါပါဘူးဗျာ။အဲဒါ အပိုင်း(၃)ကို ဘာကြောင့်ပေးမဖတ်ရဲသလဲမသိပါ။အဘတို့ကတော့ ဖတ်လို့ရတာပေါ့ ရွာသားကြီးတွေကိုး
အဲဒါ လစ်ဘရယ်ကျတယ်လို့ခေါ်တယ်။ကျေးဇူးပါခင်ဗျ အဲလောက်သဘောပေါက်ရင်ကို ကျေနပ်ပါပြီ။
@San Hla Gyiရေ…
အဲဒါအမှန်အတိုင်းပြောထားတာတွေပါ။သူတို့ဘာကြောင့်လက်မခံနှိုင်ရတာလဲမသိ၊ငြိမ်းချမ်းရေး တမန်တော်တွေက တစ်မျိုးဘဲဗျ။ခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော်က ခံယူချက်ချင်းအတူတူပါပဲ။သူတို့မှားနေတာလေးတွေထောက်ပြမှ မခံစားနှိုင်တန်းဖြစ်တာဗျနော်။ထူးဆန်းပါဘိ။မီဒီယာကို မီဒီယာနဲ့ပြန်ဗျင်းတာတောင် ကျုပ်တို့ အိုင်ခူးကကြောက်တတ်လိုက်တာဗျာ။သူက brain strong ချင်တယ်ပြောပြီး၊လစ်ဘရယ်ပြောပြီး တစ်ညိုးဂျီးပဲခင်ည။ငြိမ်းချမ်းရေးဗုံး စတင်သောဘာသာဝင်များ အခုပြောချင်ပါတယ်။ခင်ဗျားတို့ ဟုတ်လား၊မဟုတ်လားဖတ်ပါ။ဟုတ်ရင်လက်ခံပါ၊ မဟုတ်ရင်ပြန်ဗျင်းပါ။ခင်ဗျားတို့ ကျမ်းစာအတိအကျနဲ့ကိုတင်ပေးမှာပါ။ဟာဒီးစ် တွေ ထဲမှာ Sahih Bukhari ဆာဟိဘူကာရိ ဟတ်ဒီးစ် သည် မူဆလင်အများစု က authentic အဖြစ်ဆုံး အမှန်ဆုံးဟု တစ်ညီတစ်ညွတ်တည်း လက်ခံထားသော ဟတ်ဒီးစ်ဖြစ်ပါသည်။အဲဒါနဲ့ကို ရှင်းပေးဦးမှာပါ။ကိုစံလှကြီးစောင့်ကြည့်နေပါ။ဆတ်ဆတ်ထိမခံအသူများဖြစ်မည်နည်း သိချင်ပါ၏။
ကျေးဇူးပါခင်ဗျ။ကျွန်တော်လဲ သည်းညည်းမခံ နှိူင်လို့ အမှန်အတိုင်းတွေ့တာတွေကိုပြောလိုက်တာပါ။
ဦးဂျစ်ပြောသလိုစောင့်နေခဲ့လို့၊သည်းညည်းခံခဲ့လို့ အခု ဘူးသီးတောင်မောင်တောကိုပဲကြည့်စေလိုပါတယ်။
” ကျွန်တော် တစ်လုံးမှဆဲတာ ၊ မိုက်ရိုင်းစော်ကားထားတာ မပါပါဘူးဗျာ ”
ဟုတ်ကဲ့ ။ ကိုမိုးတိမ် ရေ ။
ဆဲတာ ၊ မိုက်ရိုင်းစော်ကားထားတာ မပါရင် ။
အဘ အနေနှင့်တော့ ကန့်ကွက်စရာ မရှိပါဘူးကွယ် ။
အချက်အလက်မှန်ကို ၊ သူများ နားခံသာယုံပဲ သာသာ လုပ်ပါကွယ် ။
ဘာသာရေး ပြဿနာ ထပ် ဖြစ်လောက်အောင်လဲ မကြမ်းစေချင်ပါဘူး ။
အပြောမှန် ( အချိန်အခါ မှန် ) ဖို့ကလည်း လိုသေးသကိုး ။
@သဂျီးရေ blog ထဲမှာအရင်တင်ပြီးသားမို့ point ပေးဖို့မလိုဘူးပြောရတာပါ။ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဒဲ့ပြောရတာ။
@ဒုတ်ထိုးရေ…ဦးတော့မတတ်ပါနဲ့ဗျာ အနော်က ငယ်ငယ်ရေးရှိသေးတာခင်ည။ကျေးဇူးပါဂျာ။
အရှက်မရှိလွန်းလို့ ရှင်းပြလိုက်တာပါခင်ဗျ။လွတ်လပ်ခွင့်အော်နေတဲ့ကောင်တွေ ဘယ်လိုလွတ်လပ်တယ်ဆိုတာ အပိုင်း(၄)တင် ရှင်းမလို့စဉ်းစားနေတာ။ဘာသာရေးကတော့ ပါလာမှာအတိအကျပဲပေါ့ခင်ဗျ။အဲကျရင် ကျုပ်အလွန်ဖြစ်မှာလဲခင်ဗျားပြောသလို စဉ်းစားနေရလို့ပါ။
ဘယ်လောက်တောင်ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှု့တွေရှိလဲ ဘယ်ကျမ်းကိုးချက်တွေကြောင့်လဲပါ ဗျင်းမလို့ဗျ။အခုတော့
အရှိန်သတ်နေပါတယ်။ထပ်မစော်ကားရင် ဘာမှထပ်မတင်သေးဘူး စောင့်နေပါတယ်ခင်ည။ကျုပ်က အမှန်တရားကို နည်းနည်းလေးပဲ ချပြရသေးတယ်။ဒင်းတို့ကလဲ တယ်ကြောက်တာကိုး ဟဟ
@မာလိန်မှုး…အဲဂဒါ ငြိမ်းချမ်းရေးဗုံး စပေါ်တယ်ပြောတဲ့ ကောင်တွေကပဲ ငြိမ်းချမ်းစွာ သဂျီးမင်းကို
အဘ ဖတ်ပြီးလောက်ပါပြီ ကျနော် ဘာမှမမိုက်ရိုင်းရပါဘူးခင်ဗျာ။
ပြဿနာ ဖြစ်အောင်တော့ မရေးချင်ပါဘူးခင်ဗျ။စော်ကား မိုက်ရိုင်းတာ သူတို့ပါခင်ဗျ။
နောက်ရေးရင် မကြေနပ်ချက်က များလွန်းလို့ ဘာသာရေးတွေပါ ပါလာပါတော့မယ်။
အခုတော့ အေးအေးနားနေပါဦးမယ်။စတင်စော်ကားရင် ကျုပ်ကလဲပြန်စော်ကားဖို့ ဝန်မလေးပါဘူးဗျ။အဲတော့ ကျေးဇူးရှင်များဘက်ကလဲ အေးအေးဆေးဆေးနေကြစေလိုပါကြောင်းးး
ကျုပ်က အမှန်တော့ အစကတည်းက ခင်ဗျားရေးမှာကို တားလို့မရပါဘူး။ သိပ်တော့ လက်မလွန်စေနဲ့ပေါ့ဗျာ။ ဘယ်နေရာမှာ ရပ်ရမလဲ ဆိုတာတော့ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် Justice နဲ့ဆုံးဖြတ်ပေတော့။ တကယ်တော့ ကျနော်ဟာ အစကတည်းက မိုးပြာဆရာတွေလို လူမျိုးတွေကို မဆွေးနွေးမိအောင် ရှောင်ခဲ့တယ်။ သူတို့နဲ့ ဆွေးနွေးဖြစ်သွားတာလည်း သူကြီးက ခေါ်လို့ပါ။ ဒီ မွတ်ဆလင် ဘာသာဝင်တွေကျတော့ အတွေးအခေါ်ပိုင်းထက် သူတို့ ဘယ်တုန်းက ဘယ်လိုရက်စက်တယ် ဘာညာတွေကျတော့ သိပ်ပြောရမှာ စိတ်မပါဘူးဗျာ။ ကဲ အဲဒီတော့ ချုပ်ပြောရရင် ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် justice နဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီး ကြည့်လုပ်ပေတော့။
ဦးမိုးတိမ် မှန်ပါတယ် ၊ အပြည့်အဝထောက်ခံတယ် ၊
ကျနော့်ရင်ထဲ ရှိတာတွေ အားလုံး ထုတ်ခွင့်ရလိုက်သလို ခံစားရမ်ိတယ်။
ဦးမိုးတိမ်လို ရေးတတ်ချင်တယ် ၊ဒီလိုPost မျီုးဖတ်လိုက်ရလို့
အရမ်းကျေနပ်မိပါတယ် ဦးမိုးတိမ် ။
ကိုမိုးတိမ်ခင်ဗျား… ဂဇက်ရွာသူကြီး ဦးခိုင်မှ တင်လာတဲ့ ပို့စ်များအပေါ် အရေးယူနေပြီမို့ ဆိုက်တာဝန်ခံ အယ်ဒီတာတဦးရဲ တောင်းဆိုချက်ကို လေးစားရပါမယ်။သူ့ရွာမှာနေရင် သူ့စည်းကမ်းပေါ့ဗျာ.. ရွာသူားဆက်ဆံရေးကို တန်ဖိုးထားတယ်ဆိုရင် ပြောတာပါ။ ရခိုင်အရေး ခုတုံးလုပ် ဖွနေတဲ့ တာလီဘန်များဖက်က ငြိမ်ပြနေတာကို သတိပြုပါ။ ကိုယ့်ဖက်က ထိုက်သင့်သလောက် တုံ့ပြန်ပြီးပြီမို့ ကျေနပ်သင့်ပါပြီ။ နို့မို့ရင် မူလရည်ရွယ်ချက်နဲ့ လွဲချော်သွားပြီး ကိုယ်တိုင် အစွန်းရောက်အဖြစ် ပုံဖော်ခံရနိုင်တယ်။ သိပ်ဖွလွန်းရင် ဘယ်သူ့ဘယ်သူမှန်း မသိနိုင်အောင် ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ကတော့ ဂေဇက်ကိုတန်ဖိုးထားလို့ ရွာကိုတိုက်ခိုက်လာနိုင်တဲ့ အတွင်းအပြင်ရန်သူ၊ သူ့လူကိုယ်ဖက်သား၊ တန်ပြန်ထောက်လှမ်းရေး အန္တရာယ်အားလုံးကို သတိကြီးကြီးနဲ့ စောင့်ကြည့်နေရပါကြောင်း…..
အခုဝမ်းသာစရာကောင်းတာက areno areno ရဲ့  အရှက်မရှိ post ကိုဖျက်ပေးလို့ ကျွန်တော့ ရည်ရွယ်ချက် အောင်မြင်သွားပြီဖြစ်ပါကြောင်းခင်ဗျ။ထပ်တင်ဖို့ စိတ်ကူးကို ပါယ်ဖျက်လိုက်ပါပြီ။
သဂျီးကိုလဲ လေးစားပါတယ်ခင်ဗျ။အဲဒီလို ပြတ်ပြတ်သားသားရဲရဲဝံ့ဝံ့လုပ်စေလိုပါကြောင်းးးး
အတူတိုက်ပွဲဝင်ပြီး ကော်မန့်ပေးပြီး ဆန့်ကျင်သူများအားလုံးကို ကျေးဇူးအထူး ဒီနေရာကနေတင်ပါတယ်။
သူတို့အေးအေးမနေရင်တောင် သဂျီးက အရေးယူပေးမှရွာအေးချမ်းပါမယ်။ဖျက်သင့်ရင် အခုလို ပြတ်ပြတ်သားသားဖျက်ပေးပါ။သူကြီးကို ဒီတစ်ခုတော့ လေးစားသွားပါပြီ။မဟုတ်တာတင်ရင် လုံးဝ(လုံးဝ)လက်သင့်မခံပါက ဒီရွာကြီး ပိုမိုအေးချမ်းတိုးတက်စေပါမည်။ကျွန်တော်လဲ အေးအေးချမ်းချမ်း
post များကိုဖတ်ပြီး အေးချမ်းစွာ ကော်မန့်ပေးလို့ရပါမည်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သဂျီးမင်းလဲ အေးချမ်းသာယာပါစေ။
တိုက်နေကြတယ် ဆိုပါလား ရွာကြီး ဘာမှတော့ ဖြစ်ပုံမရဘူးနော်
ကောင်းလိုက်တဲ့ စီကျူရတီ ။
Though the historical facts presented in the post seemed to be correct, I am very unhappy to read this kind of post as it will only add fuel into fire with current hostilities between residences of different religions in Rakhine. As some of the comments suggested, the terrorists acts committed by some extremists and Talibans should not be labeled as acts of muslims as it is totally unfair. I also don’t want to give any comment on islam asareligion as it is the faith of some of the world populations and there are numerous good, decent, honorable people in each and every religion including Islam. What make things worse is extremists and hawks in each and every religion who try to criticize and attack other religion. The preacher from the states who tried to burn “Koran” is mostly responsible for the terrorist acts ,( which took the lives of several innocent people in Afghanistan and other places) that was done in retaliation to it. Even if we have numerous sound justifications, we are not free to insult or attack other people’s faith and when it was happen it looks as if we declare war on them. When we viewed the current unrests in Rakhine and other places, we have to be careful not to linked this with racial or religious issues and we should be aware that these things happen as the rule of law is very weak here and when people were grouped into mob and motivated by anger, hostilities , they became unreasonable regardless of whoever they were, liable to commit the craziest, cruelest things even hard to imagine. We should not protest governments of other countries just because some riots happen in Bangladesh as we can see that the existence of Buddhist monasteries,temples and pagodas indicated that there were buddhists people ( even very little minority ) living in the country and they were freed enough to believe in Buddhism. People who violated the law should be dealt in accordance with law and there should be effective enforcement to prevent further unrests. Government must strong enough to show that they mean to enforce the law in effective manner especially in the areas where there were such unrests.
in brief, we should not compare between religions as this will only led to more conflicts and we also should not denounce other’s religion and faith. As our Lord Buddha said all mankind /beings on this earth used to be relatives and we should seekapeaceful solution when facing problems. That does not imply we should not use force against terrorists who threatening the lives of mankind, just the contrary. We should effectively eliminate such terrorists regardless of their religion.
Any though on this , Saya U Moe Tein?
Any thought on this , Saya U Moe Tein?
I would like some our Myanmar people to be broad-minded and more civilized and we still need to open our eyes and viewed the current issues with broader perspective in suchaway to becomeamore active member of the international community. With the introduction computer , IT and internet, the world become narrower and if we fail to see things that are moving with tremendous pace, we will be the ones who will be suffered.Though nationalism and patriotism are good enough values they alone are not enough to face the challenges of the current century.